Search Results ဇာဂနာ | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 2
>SHE's new song on her WWW
ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံ ၁၉ - (သားသတ်သမား သမ္မတ၏ နိဂုံး) - Ohn Naing
ဇာဂနာနဲ့ Home Entertainment ၏ ဒုတိယခြေလှမ်း Motion Video Magazine ဆန်ဖရန်ဘေးဧရိယာမှာ ၀ယ်ယူအားပေးနိုင်ပါပြီ SF Burmese Community Organizers and Friends၊ မိုးမခ၊ ဇန်န၀ါရီ ၃၁၊...
မူဆယ်မြို့ စာပေဟောပြောပွဲ – ဇာဂနာ၊ စမ်းစမ်းနွဲ့ (သာယာဝတီ)၊ ရွှေကူမေနှင်း တို့ ဟောပြော မိုးမခဓာတ်ပုံသတင်း၊ ဓာတ်ပုံ ပြေ (ဆေး၂)၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၂ ဒီဇင်ဘာ ၁၈၊ ရှမ်းပြည်နယ်၊...
ဗိုလ်သန်းရွှေ ထီပေါက်ခြင်း (ကိုဇာဂနာ ဖတ်ဖို့ ဟာသ) ပျော်တော်ဆက်သာဂိ အောက်တိုဘာ ၂၂၊ ၂၀၀၉ (လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ နှစ်က ရေးခဲ့တဲ့ သရော်စာကို အခု ပရိသတ် ပျော်ရအောင် ပြန်လည်တင်ဆက်ပါတယ်။ မိုးမခအယ်ဒီတာအဖွဲ့) စာမရေးတာ အတော်ကြာပေါ့ဗျာ။ နေကောင်းတယ် မဟုတ်လား။ တလောကတောင်...
မိုးမခ၊ အောက်တိုဘာ ၂၂၊ ၂၀၁၂ ယမန်နေ့က ရန်ကုန်မြို့မှာ အထူးပွဲပြပြီး Home Entertainment အဖွဲ့ရဲ့ မြန်မာပြည်၏ ပထမဦးဆုံး မိုးရှင်းမဂ္ဂဇင်းဆိုတာကို ထုတ်လုပ်ခြင်း မိတ်ဆက်ပွဲ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ အရုပ်တွေနဲ့ ဖော်ထားတဲ့ မဂ္ဂဇင်း...
ဇာဂနာက လက်ရှိတိုင်းပြည်အရေးနဲ့ လူငယ့်အရေးသဘောထား ထုတ်ပြော
မိုးမခရုပ်သံ၊ ဇွန် ၁၂၊ ၂၀၁၂ လွန်ခဲ့သည့် ဇွန် ၉ က လန်ဒန်ရောက် ကိုဇာဂနာက ယူကေရှိ NLD-LA ရုံးခန်းတွင် ၎င်း၏ လက်ရှိအခြေအနေနဲ့ တိုင်းပြည်အပေါ်၊ လူငယ်များအပေါ် သဘောထားကို...
Zarganar 90 – ဇာဂနာနဲ့ မြပုဏ္ဏမာအငြိမ့်အဖွဲ့ရဲ့ ၉၀သင်္ကြန် သံကြပ်များ
ဇာဂနာနဲ့ မြပုဏ္ဏမာအငြိမ့်အဖွဲ့ရဲ့ ၉၀သင်္ကြန် သံကြပ်များ မိုးမခရုပ်သံ ပြန်လည်ဆန်းသစ်ခြင်း၊ဧပြီ ၁၅၊ ၂၀၁၂ No tags for this post. Related posts No related posts.
ဓာတ်ပုံသတင်း မတ် ၈၊ ၂၀၁၂လူရွှင်တော်ဇာဂနာက “ကျနော် ဒီနေ့USA ကနေ မြန်မာပြည် ပြန်ပါပြီခင်ဗျာ.. ကျနော့်ညီငယ် လေဆိပ် လိုက်ပို့ ပါတယ်.. US ရောက်တုံး အစစအရာရာ ကူညီပေးခဲ့သူများအားလုံးကို...
ကိုဇာဂနာနဲ့ ကနေဒါမြန်မာမိသားစုများ တွေ့ဆုံကြမည် မိုးမခရွာဆော်ကြီး၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅၊ ၂၀၁၂ လာမည့် မတ်လ ၃ ရက်၊ တနင်္ဂနွေ၊ ညနေပိုင်း၊ ယူနီဗာစီတီအော့်ဖ်တိုရန်တို၊ ခန်းမဆောင်မှာ … ဟောပြောပွဲနဲ့ ရုပ်ရှင်ပွဲတော် ကျင်းပမည်...
Zarganar Pwe – ကိုဇာဂနာနဲ့ မြန်မာတို့ မိတ်ဆုံပွဲတော် ဒေါ်မာမာအေး တက်ရောက်ချီးမြှင့်မည်
ဆန်ဖရန်ဘေးဧရိယာမှာ ကိုဇာဂနာနဲ့ မြန်မာတို့ မိတ်ဆုံပွဲတော် ဒေါ်မာမာအေး တက်ရောက်ချီးမြှင့်မည် မိုးမခအထောက်တော် ၀၀၂၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄၊ ၂၀၁၂ ဇန်န၀ါရီ လကုန်ပတ်က အမေရိကန်ပြည်သုို့ ခရီးယာယီထွက်လာသူ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းနှင့် စွယ်စုံအနုပညာရှင် ကိုဇာဂနာသည် ၀ါရှင်တန်ဒီစီနှင့်...
Zarganar in NYC – နယူးယောက်မြို့ရောက် ဇာဂနာနဲ့ မြန်မာတို့ တွေ့ဆုံရုပ်သံ ထွက်ရှိ
နယူးယောက်မြို့ရောက် ဇာဂနာနဲ့ မြန်မာတို့ တွေ့ဆုံရုပ်သံ ထွက်ရှိ မိုးမခရုပ်သံ ကောက်နုတ်ချက်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂၊ ၂၀၁၂ ယမန်နေ့က နယူးယောက်မြို့တော်မှာ အမေရိကန်ပြည်ရောက် ကိုဇာဂနာနဲ့ မြန်မာမိသားစုများတွေ့ဆုံပွဲ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ ကိုဇာဂနာမိတ်ဆွေ လူရွှင်တော်ကိုစုတ်ဖွား စီစဉ်ပေးတဲ့...
မြန်မာပြည်က ကိုဇာဂနာ၊ ဒေါ်ဘောက်ဂျာနှင့် ဒေါ်ခင်သန်းမြင့်တို့ ကလင်တန်နှင့်တွေ့ဆုံ ကိုဇာဂနာက ခင်ညွန့်နဲ့ တွေ့ဆုံရာတွင် ရေတောင် မတိုက်ဟု အင်တာဗျူးတခုတွင် ပြော မိုးမခဓာတ်ပုံသတင်း၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၉ ၊ ၂၀၁၂ ဖေဖော်ဝါရီ ၈၊...
Zarganar – ကိုဇာဂနာ မေရီလင်းမြန်မာမိသားစုများနဲ့ တွေ့ဆုံ၊ ယူကျုရုပ်သံထွက်ရှိ
ကိုဇာဂနာ မေရီလင်းမြန်မာမိသားစုများနဲ့ တွေ့ဆုံ၊ ယူကျုရုပ်သံထွက်ရှိ မိုးမခ၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၇၊ ၂၀၁၂ ဇန်န၀ါရီလကုန်က စတင်ပြီး အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကို အလည်အပတ် ရောက်ရှိလာတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်း၊ အနုပညာရှင် ကိုဇာဂနာက ၀ါရှင်တန်ဒီစီက အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီး...
>မိုးမခနဲႛႚ စကားလက်ဆုံ – ဇာဂနာ – ဘန်ကီမနြ်း ကို မ္တွော်နေသလား
>Make Shift Tents for Burmese Refugee setup by the Burmese volunteer led by Burmese Artists မိုးမခနဲ့ စကားလက်ဆုံ – ဇာဂနာ(လေဘေး...
>မိုးမခနဲ့ စကားလက်ဆုံ – ဇာဂနာ
> မိုးမခနဲ့ စကားလက်ဆုံ – ဇာဂနာ“ရန်ကုန်မြစ်ကြီး ညှီပြီင်္း အနံအသက်တွေ ထွက်နေပါပြီ”မိုးမခမေ ၁၁၊ ၂၀၀၈ ရုပ်ရှင်ပညာရှင်၊ အနုပညာရှင်တွေနဲ့ စာနယ်ဇင်းပညာသည်တွေ စုစည်းလို့ လေဘေးဒုက္ခသည်တွေကို အတတ်နိုင်ဆုံး အကူအညီပေးဖို့ ကြိုးစားနေပါတယ်။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကလည်း...
>ူပည်သူႚအခဵစ်တော် ဇာဂနာကို ဒိန်းမတ် ကလောင်ရင်ြမဵားအသင်းက ဂုဏ်ထူးဆောင်အူဖစ် ရြေးမိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၄ဖေဖော်ဝၝရီ ၁၃၊ ၂၀၀၈ိုံင်ငံတကာ စာရေးဆရာမဵားအသင်ုးကီး (PEN) ၏ ဒိန်းမတ် ကလောင်ရင်ြမဵားအဖြဲႚခြဲကူပည်သူအခဵစ်တော် အိုံပညာရငြ်...
> ဇာဂနာ နှင့် သီးလေးသီး ရဲ့ ဆေးရောင်စုံ အငြိမ့် ပြက်လုံးခွင်များ ဇာဂနာဒီဇင်ဘာ ၂၉၊ ၂၀၀၇ စိန်သီး။ ။ အရွှမ်းမဖောက်ဘဲ ခွန်းထောက် ဆိုသွားတာ ညီလေးပန်းသီး မှတ်တယ် ပန်းသီး။...